Nabata Öst Nori Advokatbyrå AB
Öst Nori Advokatbyrå AB bụ onye iwu kwadoro iwu ụmụ mmadụ na-ahụ maka nchekwa na iwu mpụga,
iwu ezinụlọ na mpụ na ihe gbasara ikike na ikike na nlekọta ahụ ike. Ụlọ ọrụ dị na Solna Centrum.
Biko kpọtụrụ anyị maka ndụmọdụ TELEPHONE FREE!
UZI AHỤ NA AHỤ
Anyị na-enyere gị aka, ndị a manyere ka ha si n'ala gị pụọ ma chọọ ebe obibi na Sweden.
Anyị na-enyere gị aka n'okwu gbasara iwu banyere ezinụlọ.
Anyị na-etinye ọrụ dịka onye ọka iwu nke ndị na-ekpechite ọnụ na ndị na-agbachitere ọha na eze.
Anyị na-enyekwara gị aka na ikikere ọgwụgwọ na ikike na nlekọta ahụ ike.
Öst Nori Advokatbyrå AB enyere gị ndị a manyere ofufe si mba gị na-achọ ebe obibi na Sweden, mgbapu. Anyị na-enyekwara gị aka ka ị na-achọ maka ikike akwụkwọ ikike maka njikọ gị na onye nọ na Sweden maọbụ na ị na-etinye akwụkwọ maka ụmụ amaala Swedish. Ọ bụrụ na ịchọrọ itinye akwụkwọ maka akwụkwọ ikike ma ọ bụ ikike ebe obibi n'ihi ọmụmụ na Sweden, anyị nwere ike inyere gị aka na ngwa ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ ọhụụ nke nwere ihe nkwụsị maka ịkwụsị nchụpụ, anyị nwere ike inyere gị aka na ngwa maka mmanye. Öst Nori Advokatbyrå AB na-enyekwara gị aka n'ụlọ mkpọrọ.
N'okwu nke iwu nchekwa na iwu mpụga, ị nwere ike ịnweta onye ọka iwu nke enyere aka n'ihu ọha. Mgbe ahụ onye isi iwu gị ga-akwụ ụgwọ site na steeti. Ị nwere ikike ịchọrọ onye ị chọrọ ka ọ bụrụ onye na-akwado ndị mmadụ. Öst Nori Advokatbyrå AB na-arụkwa ọrụ dịka onye nnọchiteanya nke onwe ya na ụdị ikpe niile gbasara ụlọ ikike.
Öst Nori Advokatbyrå AB nwere ezigbo ahụmahụ na-arụ ọrụ na ihe niile mgbakwasị maka obibi ikike na nsogbu metụtara obibi ikike maka ndị okenye na ụmụ. Biko kpọtụrụ anyị maka ozi na ndụmọdụ.
Na Öst Nori Advokatbyrå AB, a ga-enyere gị aka na nsogbu gbasara iwu gbasara ezinụlọ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ezinụlọ agbasasị, ajụjụ banyere ebe obibi ụmụaka, mmekọrịta na njide nwere ike ibili. A na-ahụkarị, nsogbu akụ na ụba dị ka onye ga-anọgide na ụlọ na mmejuputa iwu mgbazinye ụlọ. Ọ bụrụ na enwere nghọtahie, ụlọikpe ahụ nwere ike ikpebi ajụjụ ndị a.
Anyị na-enyekwara gị aka na nkwekọrịta dị n'etiti alụmdi na nwunye na alụmdi na nwunye maka ịlụ di na nwunye / alụmdi na nwunye, dịka asambodo onyinye na ọchịchọ. Biko kpọtụrụ Ö Nori Advokatbyrå maka ozi ndị ọzọ na ndụmọdụ.
Öst Nori Advokatbyrå na-ewe ozi na mpụ ndị omempụ ma dịka ọkàiwu nke ndị na-ekpechite ọnụ na ndị na-agbachitere ọha na ndị ọzọ. Anyị na-anata ọrụ dịka onye nnọchiteanya pụrụ iche maka ụmụaka. Ọ bụrụ na ị na-ekpughe na mpụ ma ọ bụ na-enyo enyo maka mpụ, ị nwere ike ịrịọ onye ọka iwu. Biko kpọtụrụ Ö Nori Advokatbyrå maka ozi ndị ọzọ na ndụmọdụ.
na Öst Nori Advokatbyrå AB Nweta enyemaka site n'aka onye ọka iwu nwere ezigbo ahụmahụ, ihe ọmụma zuru oke na itinye aka siri ike. A na-enweta ọdịmma nke onye ahịa n'ụzọ ọ bụla ma anyị nọ n'akụkụ gị n'akụkụ usoro iwu.
- ọkàiwu, njide -
Asụsụ: Swedish, Bekee
- Aka ọkàiwu -
Asụsụ: Swedish, Bekee, Albanian
Öst Nori Advokatbyrå AB na-anabata ngwa ngwa maka ọrụ na ụlọ ọrụ. Unu ndị natachara akara iwu ma nwee mmasị na-enwu ọkụ maka oke ruru mmadu n'ozuzu ya, yana mwepụ na ikike ụmụ mmadụ, dịka iwu ezinụlọ na iwu ikpe-azụ, bụ ndị nabatara iziga akwụkwọ ọrụ gị. Ị na-aga ọkàiwu ma ọ bụ onye na-ahụ maka iwu na-achọ ka nghọta dị irè banye n'ọrụ onye ọka iwu iwu mmadụ? Anyị na-anabata ngwa ngwa maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ. Ị nabatara iziga ngwa gị maka ọrụ / ịga akwụkwọ na akwụkwọ ozi na CV site na e-mail na: linn@ostnoriadvokatbyra.com
Site na ekwentị, email ma ọ bụ zipụ ozi site n'ụdị anyị.
Mee atụmatụ 5
2017 Öst Nori Advokatbyrå AB | Kwadoro site na wordPress